IVA 1T ရေခဲထုတ်စက်(၁၀၀% အသစ်) ကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်ရဲ့ ခေတ်ရှေ့အပြေးဆုံးနည်းပညာနဲ့ ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။
မော်ဒယ်- IVA 1T
ကုနျပစ်စညျးရဲ့ ကုဒျနံပါတျ: IVA1T
IVA1T 1ton exported ice making machine (100% New) is supplied with high quality and at the most competitive price in the market.
IVA 1 T ရေခဲထုတ်စက်(၁၀၀% အသစ်) ကို အဆင့်မြင့်ဆုံးကွာလတီဖြင့် ဈေးကွက်မှာ အချိုသာဆုံး ဈေးနှုန်းနဲ့ ပေးပို့နေပါတယ်။
Are youaowner ofabusiness chain who wants to invest in one new ice making machine to serve your customers with the cool food and drinks without using unqualified tube ice of unclear origin?
သင်က သင့်ရဲ့ စီးပွါးရေးမှာ ဝယ်ယူသူတွေကို အအေး အချိုရည်တွေနဲ့ ဧည့်ခံဖို့ အရည်အသွေးမမီတဲ့ ရေခဲတွေကို မသုံးချင်ဘဲ ရေခဲထုတ်စက်အသစ်ကို ဝယ်ယူချင်တဲ့ သူလား။
ရေခဲထုတ်စက်အသေးမှ စက်ရုံသုံးအထိ ဈေးနှုန်းတွေအကြောင်း ပိုမိုသိရှိဖို့ တွင် https://vietan.vn/may-lam-da-vien ဝင်ရောက်လေ့လာလိုက်ပါ။
Currently, in response to the growing demand for ice due to hot weather, numerous ice making machine facilities, including poor quality ones, have appeared. Therefore, the business with great demands of ice such as the restaurants, supermarkets, restaurants, hotels, bars, or households often choose ice making machines to ensure the ice quality and save cost (around 60%).
ရာသီဥတု ပူလာတာနဲ့အမျှ လူတွေက ရေခဲတွေကို အသုံးပြုတာ များလာပါတယ်။ ထို့အတူ ဈေးကွက်မှာလည်း အရည်အသွေးနိမ့် ပစ္စည်းတွေ အပါအဝင် ရေခဲထုတ်စက်တွေ အမြောက်အမြား ပေါ်ပေါက်နေပါတယ်။ ဒါကြောင့် စားသောက်ဆိုင်၊ စူပါမားကတ်၊ ဟိုတယ်၊ ဘား၊ အိမ် စတဲ့ ရေခဲအများကြီးသုံးတဲ့ နေရာတွေမှာ ရေခဲကွာလတီ သေချာစေရန်နဲ့ အကုန်အကျ ၆၀% လောက် ချွေတာဖို့ ရေခဲထုတ်စက်တွေကို ရွေးချယ်ကြပါတယ်။
Asaleading company in the bottled water industry with nearly 10 years of experience in supplying exported stainless steel ice making machines, Viet An’s products have been widely chosen by the big corporation such as Samsung, Shinha Vina, Diana, etc. In this article, we are going to introduce the IVA1T 1ton exported stainless steel ice making machine.
ရေဘူးစက်ရုံမှာ ဦးဆောင်ကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့အပြင် စတိန်းလက်စ်စတီး ရေခဲထုတ်စက်တွေကို ၁၀ နှစ်နီးပါးပေးပို့တဲ့ အတွေ့အကြုံအရ Viet An ရဲ့ ပစ္စည်းတွေကို Samsung, Shinha Vina, Diana စတဲ့ ကြီးမားတဲ့ ကော်ပရေးရှင်းတွေက ရွေးချယ်တာ ခံရပါတယ်။ ဒီဆောင်းပါးမှာ ကျွန်တော်တို့က IVA 1T ၁ တန် တင်ပို့ထားသော စတိန်းလက်စ်စတီး ရေခဲထုတ်စက်ကို မိတ်ဆက်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
IVA1T 1ton exported stainless steel ice making machine (100% New)
IVA 1T ၁ တန် တင်ပို့ထားသော စတိန်းလက်စ်စတီး ရေခဲထုတ်စက်(၁၀၀% အသစ်)
Viet An’s VA1T 1ton exported stainless steel ice making machine is one of the most popular brands of ice cleaning machines in the market nowadays. Asahigh-quality ice making machine with reasonable price, Viet An’s stainless steel ice making machines are always highly appreciated by the customers in the product quality surveys. Viet An’s VA1T 1ton exported stainless steel ice making machine is produced according to ISO 9001:2015 international quality control standards with the genuine components exported from the most advanced countries in the world.
Why do we just affirm our competitive prices instead of the best prices in the market? Because we do not intend to provide our customers with the poor products.
Poor ice making machines are the machines assembled with the old components such as:
Viet An ရဲ့ VA 1T ၁ တန် တင်ပို့ထားသော စတိန်းလက်စ်စတီး ရေခဲထုတ်စက်က ယနေ့ခေတ် ဈေးကွက်မှာ နာမည်ကြီး တံဆိပ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အရည်အသွေးမြင့်ပြီး ဈေးနှုန်းချိုသာတဲ့ ရေခဲထုတ်စက်ဖြစ်တာကြောင့် ဝယ်ယူသူတွေရဲ့ အသိအမှတ်ပြုခြင်းကို ခံရပါတယ်။ Viet An ရဲ့ VA 1T ၁ တန် တင်ပို့ထားသော စတိန်းလက်စ်စတီး ရေခဲထုတ်စက်ကို နိုင်ငံတကာ ကွာလတီထိန်းချုပ်မှု စံနှုန်းဖြစ်တဲ့ ISO 9001:2015 အတိုင်းထုတ်လုပ်ထားပြီး စစ်မှန်တဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေကိုတော့ ကမ္ဘာပေါ်မှ ခေတ်အမီဆုံးနိုင်ငံများမှ တင်သွင်းထားပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့က ဘာလို့ ဈေးမများဘဲ ဈေးနှုန်းချိုသာစွာ ရောင်းချတာလဲ? ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင် ကျွန်တော်တို့က ဝယ်ယူသူတွေကို အရည်အသွေးနိမ့်တာတွေ မပေးချင်လို့ပါ။ အရည်အသွေးနိမ့် ရေခဲထုတ်စက်တွေက အောက်တွင် ဖော်ပြထားသလို အစိတ်အပိုင်းအဟောင်းတွေကို အသုံးပြုလို့ပါ။
Old compressors imported after 10 years of using. These compressors are usually sold atadramatically cheap price of around 200USD and are extremely 800USD).
၁၀ နှစ်ကြာ အသုံးပြုပြီးသော ဖိသိပ်စက် အဟောင်းများ။ ဒီဖိသိပ်စက်တွေကို အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၂၀၀ ဝန်းကျင်ဖြင့် ဈေးချိုစွာ ရောင်းလေ့ရှိပါတယ်။ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံရဲ့ ထုတ်လုပ်သူတွေကြားမှာလည်း အရမ်း ရေပန်းစားပါတယ်။ (ဖိသိပ်စက်အသစ်ကတော့ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၈၀၀ ကျသင့်ပါတယ်)
Old imported condensers.
တင်ပို့ထားသော အခိုးကို အရည်ဖြစ်စေသည့် စက်အဟောင်းများ
Old imported cooling towers.
တင်ပို့ထားသော အေးစေသော တာဝါဟောင်းများ
Old imported pump system and blade set.
တင်ပို့ထားသော ရေစုပ်စက်နှင့် ဓားအတွဲဟောင်း
And many other old components.
Viet An choose another business direction. With the desire to bring customers the best products, we supply the machines using 100% new components and are produced according to the most advanced technology of the United States. This is also the reason why we can not guarantee the cheapest price in the market. However, we are committed to the most competitive and reasonable prices. Let’s takealook at Viet An's 1ton ice making machine!
Viet An မှ အခြား စီးပွါးရေး လမ်းညွှန်ချက်တွေကို ရွေးချယ်ပါတယ်။ ဝယ်ယူသူတွေကို အကောင်းဆုံး ပစ္စည်းတွေ ယူဆောင်လာပေးမယ်ဆိုတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ ကျွန်တော်တို့က ၁၀၀% အသစ် အစိတ်အပိုင်းတွေကို ပေးပို့ပြီး US ရဲ့ ခေတ်အမီဆုံး နည်းပညာအတိုင်း ထုတ်လုပ်ပါတယ်။ ဒါက ဈေးကွက်က ဈေးပေါတာကို ကျွန်တော်တို့ အာမမခံနိုင်တဲ့ အကြောင်းပြချက်ပါပဲ။ သို့သော်လည်း ကျွန်တော်တို့က အချိုသာဆုံးသော ဈေးနှုန်းကိုတော့ ပေးစွမ်းပါတယ်။ Viet An ရဲ့ ၁ တန် ရေခဲထုတ်စက်ကိုကြည့်လိုက်ရအောင်။
Below are some outstanding advantages of Viet An’s ice making machines of all capacities.
အောက်တွင် လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းမျိုးစုံရှိတဲ့ Viet An ရဲ့ ရေခဲထုတ်စက်တွေအကြောင်း ဖော်ပြထားပါတယ်။
Compressor (100% New)ဖိသိပ်စက်(၁၀၀% အသစ်)
Currently, in the market, there are no manufacturers using new compressors for producing ice making machines except for Viet An. This is an outstanding point of VA’s products. It also helps to increase the product shelf life and minimize the errors incurring.
ယခုအခါ ဈေးကွက်မှာ Viet An မှ လွဲပြီး ရေခဲထုတ်စက်တွေမှာ ဖိအားသိပ်စက် အသစ်သုံးပြီး ထုတ်လုပ်တဲ့သူ မရှိပါဘူး။ ဒါက Viet An ပစ္စည်းတွေရဲ့ ထူးချွန်သော အချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါက ပစ္စည်းရဲ့ ထားသိုနိုင်တဲ့ သက်တမ်းကို ရှည်စေပြီး အပျက်အစီးလည်း နည်းစေပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဖိသိပ်စက်တွေအားလုံးကို နိုင်ငံခြားတွင် တင်းကြပ်သော ကွာလတီ ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာ ထုတ်လုပ်ပါတယ်။ ဒီစက်ကို အော်တို ဖြတ်တောက်ခြင်း၊ ဖိသိပ်ခြင်း၊ ပုံသွင်းပေးခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်များ ပါဝင်တဲ့ အော်တို CNC စနစ်နဲ့ ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။ အဲ့ဒီ့နောက် ဂျာမနီမှ တင်သွင်းထားတဲ့ အကောင်းဆုံး ဖိအားတိုင်းတာ စက်ဆီကို ရွှေ့ပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Effectively control the cooling capacity and energy consumed
အေးစေသော လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းနဲ့ အင်နာဂျီစားခြင်းကို ထိထိရောက်ရောက် ထိန်းချုပ်ပေးပါတယ်။
Remarkably save energy and increase the shelf life of the products
အင်နာဂျီကို အံ့သြဖွယ်ရာ ချွေတာပေးပြီး ပစ္စည်းတွေရဲ့ ထားသိုနိုင်တဲ့ သက်တမ်းကို ကြာရှည်စေပါတယ်။
Control the temperature and keep the cooling system performing stably and smoothly with little noise.
အပူချိန်ကို ထိန်းချုပ်ပေးပြီး အေးပေးသော စနစ်ကို တည်တည်ငြိမ်ငြိမ် ချောချောမွေ့မွေ့ဖြင့် ဆူညံမှုမရှိဘဲ လုပ်ဆောင်စေပါတယ်။
The compressor plays an important role in the whole tube ice making systems as its performance affects the entire manufacturing process. That is the reason why you should chooseanew compressor to optimize the production.
ဖိသိပ်စက်တွေက ထုတ်လုပ်မှုတစ်ခုလုံးအတွက် အကျိုးသက်ရောက်တာကြောင့် ရေခဲထုတ်လုပ်တဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးမှာ အရေးကြီးတဲ့ အခန်းကဏ္ဍမှာ ပါဝင်ပါတယ်။ ဒါက သင်ဒီစက်ကို ရွေးချယ်သင့်တဲ့ အကြောင်းပြချက်ပါပဲ။
Liquid and gas separation system - 2019 advanced technology
အရည်နှင့် အငွေ့ ခွဲထုတ်ပေးသောစနစ်-၂၀၁၉ ခေတ်ရှေ့ပြေးသော နည်းပညာ
အရည်နှင့် အငွေ့ ခွဲထုတ်ပေးသောစနစ်
As you might know, the ice making machines using old technology often have lengthy designed lines. However, with Viet An’s innovation, the traditional lines have been improved to be much more compact and convenient. The liquid and gas separation system is designed to separate liquid from the inlet air to ensure no liquid remains in the air before it is routed into the airline in order for the compressor to operate smoothly, thereby improving the machine's shelf life.
သင်သိတဲ့အတိုင်း ရေခဲထုတ်စက်တွေမှာ အလျားရှည်တဲ့ နည်းပညာအဟောင်းကို အသုံးပြုကြလေ့ရှိပါတယ်။ သို့သော်လည်း Viet An ၏ ဆန်းသစ်မှုကြောင့် ခေတ်ဟောင်းလိုင်းတွေကို ပိုပြီး သိပ်သည်းချောမွေ့အောင် တိုးတက်လုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။ အရည်နှင့် အငွေ့ခွဲထုတ်ပေးသောစက်ကို လေလက်ကြားမှ အရည်တွေကို ခွဲထုတ်နိုင်အောင် ဒီဇိုင်းဆင်ထားပါတယ်။ ဒါမှ လေလမ်းကြောင်းမှာ မလည်ပတ်ခင် လေထဲတွင် အရည်မကျန်မှာ သေချာစေပါတယ်။ သို့မှသာ ဖိအားသိပ်စက်က ချောမွေ့စွာ လည်ပတ်ပြီး သက်တမ်းလည်း ရှည်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Imported Condenser (100% New)
တင်ပို့ထားသော အခိုးကို အရည်ဖြစ်စေသည့် စက်(၁၀၀% အသစ်)
This is also an important part in the ice making process. It has the main function of condensing from gas to liquid. It is recommended to regularly clean the condenser, at least onceamonth to remove the limestone residue, otherwise, the heat exchange will be limited.
The cooling tower is one of the specialized equipment used to reduce the temperature of the water flow. It is used in an ice machine to reduce the temperature with the water and release the heat into the atmosphere. To know the performance of the cooling tower, we can check the speed of the steam and temperature of the water flowing below (water temperature is between 30 - 38 degrees). This product also requires regular cleaning of onceaweek for the best performance,
အေးစေသော တာဝါက ရေစီးဆင်းမှု အပူချိန်ကို လျှော့ချဖို့ စပါယ်ရှယ် တပ်ဆင်ထားတဲ့ ပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစက်ကို ရေခဲစက်ထဲမှာ ရေရဲ့ အပူချိန်ကို လျှော့ချပြီး ပတ်ဝန်းကျင်ထဲသို့ စွန့်ထုတ်ပေးဖို့ အသုံးပြုပါတယ်။ အေးစေသော တာဝါရဲ့ လုပ်ဆောင်မှုကို သိရှိဖို့ ရေနွေးငွေ့ရဲ့ အရှိန်၊ ရေစီးဆင်းမှုရဲ့ အပူချိန်(ရေအပူချိန် ၃၀-၃၈ ဒီဂရီ)ကို စစ်ဆေးပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒီစက်ရဲ့ အကောင်းဆုံး လုပ်ဆောင်မှုအတွက် ပုံမှန်သန့်ရှင်းပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
The pump system used in Viet An’s tube ice making machine is made from stainless steel. It isaCBU (Completely Built Up) product imported by Viet An.
Viet An ရဲ့ ရေခဲထုတ်စက်မှာ အသုံးပြုတဲ့ ရေစုပ်စက်ကို စတိန်းလက်စ်စတီးနဲ့ ပြုလုပ်ထားပါတယ်။ ဒါက Viet An မှ တင်ပို့သော CBU (အပြည့်အဝ တည်ဆောက်ထားသော) ပစ္စည်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
The electrical system used for Viet An’s ice making machines is absolutely automatic. The electrical system enables an absolutely automatic manufacturing process. The system will automatically stop when there is an electrical problem incurred and adjust the time foradesirable void. For the best performance, it is recommended to installa3 phase power - 380V.
Viet An ရေခဲထုတ်စက်မှာ အသုံးပြုတဲ့ လျှပ်စစ်စနစ်က လုံးဝ အော်တိုဖြစ်ပါတယ်။ လျှပ်စစ်စနစ်က အော်တိုထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်းစဉ်ကို လုပ်ဆောင်ပေးပါတယ်။ လျှပ်စစ် ပြသနာ ပေါ်ပေါက်တဲ့အခါ အော်တိုရပ်သွားပြီး အချိန်ညှိပေးပါတယ်။ အကောင်းဆုံး လုပ်ဆောင်မှုအတွက် ၃ ဆင့်ပါဝါ-၃၈၀ ဗို့ကို အသုံးပြုဖို့ အကြံပေးပါတယ်။
ပုံးအားသွင်းမော်တာ- ဓားအတွဲက ၁၀၀% အသစ် ဖြစ်ပါတယ်။
အရည်အသွေးမြင့် ရပ်ပေးသော အဆို့
Above are some of the latest technologies typically used for Viet An’s ice making machines. They make the production process much quicker, convenient and cost-effective. These exclusive technologies are only available in Viet An. Thanks to the great benefits of these products, they have been widely chosen by the customers despite the high prices.
အပေါ်မှာ ဖော်ပြထားတာတွေက Viet An ရဲ့ ရေခဲထုတ်စက်တွေအတွက် အသုံးပြုတဲ့ နောက်ဆုံးပေါ် နည်းပညာတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ၄င်းတို့က ထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်းစဉ်ကို ပိုမိုလျင်မြန်စေပြီး အဆင်ပြေချောမွေ့စေကာ အကုန်အကျလည်း နည်းစေပါတယ်။ ဒီပစ္စည်းတွေရဲ့ ကြီးမားတဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေကြောင့် ဝယ်ယူသူအများစုရဲ့ ရွေးချယ်ခြင်းကို ခံရပါတယ်။
IVA0.8T 800kg Industrial Tube Ice Making Machine (100% New) offers an amazing capacity of energy saving. Let's imagineanew and an old ice making machine with the same capacity, then:
IVA 0.8T ၈၀၀ ကီလိုဂရမ် စက်ရုံသုံး ရေခဲထုတ်စက်(၁၀၀% အသစ်)က အံ့သြဖို့ကောင်းတဲ့ အင်နာဂျီချွေတာနိုင်စွမ်းကို ပေးပါတယ်။ လုပ်ဆောင်မှုတူညီတဲ့ အသစ်နဲ့ အဟောင်းရေခဲထုတ်စက်ကို စဉ်းစားကြည့်ကြရအောင်။
၁၀၀% အသစ်စက်ရဲ့ ဈေးနှုန်း+ မီတာခ ၂ နှစ်
The packaging system offers an amazingly quick and convenient operation. When buying the IVA 0.8T 800Kg Industrial Tube Ice Making Machine (100% New), you will be givenapackaging system.
ထုတ်ပိုးမှုစနစ်က လျင်မြန်စွာ လုပ်ဆောင်ပါတယ်။ IVA 0.4T စက်ရုံသုံး ရေခဲထုတ်စက်(၁၀၀% အသစ်) ကို ဝယ်ယူမယ်ဆိုရင် ထုတ်ပိုးမှုစနစ်လည်း ပေးဆောင်ပါတယ်။
Viet An General Trading Limited Company လို့ သိခဲ့ကြပြီး ၂၀၀၉ ခုနှစ် သြဂုတ်လမှာ Viet An General Trading Joint Stock Company လို့ ပြောင်းလဲခဲ့ပါတယ်။ ဒီကုမ္ပဏီက ရေခဲထုတ်စက်၊ RO ရေစစ်၊ ဘူးတွေကို လောင်းဖြည့်ပေးသောစက် စတာတွေကို ထုတ်လုပ် တင်ပို့ ဖြန့်ဖြူးတဲ့ နေရာမှာ ဦးဆောင်ကုမ္ပဏီဖြစ်ပါတယ်။
In the past 20 years, with our unceasing efforts to improve our product quality as well as technical issues, Viet An have been awardedavariety of honorable prizes and certificates, including:
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် ၂၀ တုန်းအတွင်း ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကုန်ပစ္စည်း ကွာလတီနဲ့ နည်းပညာ အခက်အခဲတွေကို တိုးတက်စေရန် မလျှော့သော ဇွဲတွေကြောင့် Viet An ကို ဂုဏ်ယူစရာ ဆုတံဆိပ်များစွာ ချီးမြှင့်ခဲ့ပါတယ်။
ရွှေတံဆိပ်ဆု- ဗီယက်နမ် ထိပ်တန်း တံဆိပ်များ (၂၀၁၅)
ISO 9001:2015 လက်မှတ်(၂၀၁၅)
၂၀၁၈ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၁၈ ရက်နေ့မှာ ကျင်းပသော ဂုဏ်ပြုခြင်းနှင့် Thang Long ရွှေတံဆိပ်-ထူးချွန်သော စီးပွါးရေးလုပ်ငန်းရှင် အခမ်းအနားမှာ ရွှေဖလား ရရှိခဲ့သည်
Currently, Viet An is offeringanumber of special promotions for our ice production machines of all kinds.
ယခုအခါမှာ Viet An မှ ရေခဲထုတ်စက်အမျိုးမျိုးအတွက် စပါယ်ရှယ် ပရိုမိုးရှင်း မြောက်မြားစွာကို ပေးနေပါတယ်။
In addition to free shipping and installation services andawarranty period of 1 month, we also provide our customers withalot of attractive incentives such as free packaging system attached, discounted old storage system and water filtration system, etc.
အခမဲ့ ပို့ဆောင်တပ်ဆင်ပေးခြင်း၊ ၁ လ အာမခံပေးခြင်းတို့အပြင် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဝယ်ယူသူတွေကို အခမဲ့ ထုတ်ပိုးပေးခြင်း၊ သိုလှောင်မှုစနစ်၊ ရေစစ်စနစ်တွေကို ဒစ်စကောင့် ချပေးခြင်း စတာတွေကိုလည်း ပေးပါတယ်။
We are always available to assist you with the inquiries into the operation process.
Considering the customers as our core value, we always highly appreciate your valuable feedback. We have been trying our best to enhance price, incentive policies as well as service quality to meet your requirements. We do hope to bring you the true value through the path to modernity.
သင်ရဲ့ လည်ပတ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး စုံစမ်းမေးမြန်းချင်တာတွေအတွက် ကျွန်တော်တို့က အမြဲအဆင်သင့် ရှိနေပါတယ်။ ဝယ်ယူသူတွေကို အမြဲတမ်း တန်ဖိုးထားပြီး သင်တို့ရဲ့ တုံပြန်ချက်တွေကို အမြဲတမ်း အသိအမှတ်ပြုပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့က ဈေးနှုန်း၊ ဆွဲဆောင်သော ပေါ်လစီ၊ သင်အကြိုက်တွေ့စေမယ့် ဝန်ဆောင်မှုကွာလတီတွေကို အကောင်းဆုံးဖြစ်စေဖို့ အမြဲတမ်း ကြိုးစားနေပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့က သင့်အတွက် စစ်မှန်သော တန်ဖိုးကို ယူဆောင်လာပေးမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
For more details about our industrial 1ton ice making machine, call us now at: +84 839 31 31 31 or +84 839 32 32 32 . Thank you very much for your consideration!
၁ တန် ရေခဲထုတ်စက်အကြောင်း ပိုမိုသိရှိဖို့ +၈၄ ၈၃၉ ၃၁ ၃၁ ၃၁ သို့မဟုတ် +၈၄ ၈၃၉ ၃၂ ၃၂ ၃၂ ကို အခုပဲ ခေါ်ဆိုလိုက်ပါ။ သင့်ရဲ့ စဉ်းစားပေးမှုအတွက် အလွန်ပင် ဝမ်းမြောက်မိပြီး ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။
Hỏi đáp & đánh giá IVA 1Tရေခဲထုတ်စက်ရဲ့ (၁၀၀% အသစ်)